Nuno Oo Wolves Ugu Deeqay 250,000 Si Loola Dagaalamo Saboolnimada.
Home Horyaalka Ingiriiska Nuno oo Wolves ugu deeqay 250,000 si loola dagaalamo saboolnimada.
Tababaraha Wolves Nuno Espirito Santo ayaa ku deeqay £ 250,000 si uu uga caawiyo la dagaalanka saboolnimada kooxdiisa Wolverhampton.
Nuno, oo mas’uul ka ahaa naadiga Premier League tan iyo 2017, ayaa ku deeqay Wolves Foundation si ay uga caawiso bilaabida ‘Feed our Pack’.
Mashruucu wuxuu taageeri doonaa meelaha cuntada lagu xusho ee magaalada si loo yareeyo saameynta saboolnimada cunnada, iyo in la taageero dadka deggan ee ay saameysay cudurka faafa ee coronavirus.
Nuno ayaa yidhi: Taageerayaasha Wolves iyo dadka Wolverhampton waxay ii ahaayeen wax cajiib ah tan iyo markii aan halkan imid ku dhawaad afar sano ka hor, waxaanan doonayay inaan wax uun soo celiyo oo aan caawiyo dadka la halgamaya xilligii masiibada ayuu yidhi Nuno.
Markaad ku nooshahay magaalo waad aragtaa oo maqashaa sida dadku u saameeyeen laakiin sidoo kale waa magaalo weyn oo ay dadku iscaawiyaan oo is taageeraan waana mashruuc runtii muhiim ah oo ka socda Wolves Foundation.
Si wada jir ah ayaan u xoog badanahay, waxaana rajeynayaa in taageerayaasheena ay rabaan inay ku soo biiraan oo ay hubiyaan inaan ilaalino dadka ku nool beesheena oo inta badan u baahan xilliyadan adag.
Kahor booqashada Crystal Palace Sabtida, Wolves ayaa ku jirta kaalinta 13aad ee Premier League.
Previous articleThomas Tuchel oo ballan qaaday inuu chelsea kusoo celi doono meelaha ugu sareeysa.
Next articleLiverpool oo kusoo laabatay wadada guulaha.